Semalt प्रकट गर्छ कुन ठूला सामग्री प्रचलनहरू अब तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ
भर्खरको सामग्री प्रचलनहरूको साथ राख्नु तपाईंको साइटमा नयाँ ट्राफिकलाई आकर्षित गर्ने एक तरीका हो। जब तपाईंसँग सदाबहार सामग्री हुनुपर्दछ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं सान्दर्भिक र अपडेट रहनको लागि इन्टरनेटमा हालको चलनहरूको साथ प्रवाह गर्नुहुन्छ।
यी केहि ठूला सामग्री प्रवृत्तिहरू हुन् जुन तपाईंले आफ्नो सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिमा इन्टरनेट सफलताको लहरमा सवारी गर्नका लागि आवेदन गर्न विचार गर्नुपर्छ। सामग्री मार्केटि and र SEO आज धेरै शीर्ष-स्तरीय व्यवसायहरूको सफलताको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। वास्तवमा, वेबसाइट वा अनलाइन उपस्थिति बिना, तपाईंले अप्रत्यक्ष रूपमा सीमा तोक्नुभयो कति र कसरी तपाईंको व्यापार बढ्न सक्दछ।
किन भर्खरको सामग्रीको प्रचलनहरूको साथ राख्नु महत्त्वपूर्ण छ?
इन्टरनेटमा बाँच्नका लागि तपाईलाई सबैभन्दा उत्तम चाहिन्छ। हामी यहाँ तपाईंको वेबसाइटलाई थप सहयोगी, व्यावहारिक र प्राविधिक रूपले भययोग्य सामग्रीको उज्ज्वल भविष्यतर्फ लैजानको लागि छौं जुन तपाईंको प्रयोगकर्ताको खोज आवश्यकताहरू, बानीहरू, र प्राथमिकताहरूको साथ प .्क्तिबद्ध हुनेछ। हाम्रो राम्रो सामग्री सिर्जना गर्ने क्षमता स्थिर अभ्यासबाट आउँदछ जुन हामी चलाखी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सिर्जना गर्ने र प्रकाशित गर्ने कुरामा स्मार्ट बनाउँदछौं। नतिजाको रूपमा, हाम्रो सामग्री मार्केटिंग अभ्यास अब प्रयोग-परीक्षण होइन, तर कामको लागि बाध्य भएको कार्यको सोचविचारित योजना भएको छ।
तपाईंको सामग्रीको लागि शीर्ष-निशान भिजुअलहरू
SERP मा ट्रेंडी रहन क्रम मा, तपाइँ दृश्यात्मक अगाडि सामग्री को आवश्यक छ। मनोरन्जनबाट संचार सम्म, वेबसाइटहरूले अन्तर्क्रियात्मक र गतिशील छविहरूको शक्ति बुझ्न सुरू गरिरहेछन्। सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरूमा छविहरूको प्रभावको साथ मिलेर, यो स्पष्ट छ कि तपाईंको वेबसाइटमा छविहरू हुनु भनेको तपाईंको दर्शकहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने र राख्नको लागि उत्तम रणनीति हो।
इन्स्टाग्राम, टिकटोक र स्न्यापचट केहि सबैभन्दा लोकप्रिय दृश्य सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू छन् जहाँ युवा वयस्कहरू आजका दिनहरूमा ह्या hangआउट छन्। पुरानो वयस्कहरूले YouTube र Facebook लाई प्राथमिकता दिन सक्दछन्। यस अन्तको लागि, हामी विश्वस्त भई भन्न सक्छौं कि दृश्य सामग्री निकै भविष्यमा प्रयोगकर्ताहरूलाई रमाईलो र आकर्षक बनाउन बाध्य छ।
उदाहरण को लागी, हामी जान्दछौं कि हामी फिल्टर प्रयोग गर्न सक्दछौं वा स्न्यापचटमा आफ्नै अभिवृद्धि वास्तविकता (एआर) सिर्जना गर्न सक्दछौं। जब हामी यस प्रविधिमा पहिलो पटक आएका थियौं, हामी छक्कै पर्यौं कि साधारण छवि कसरी रोचक बनाउन सकिन्छ। भिडियो क्लिपबाट तपाईंको आफ्नै GIF सिर्जना गर्ने अर्को तरिका हो जुन भिजुअल टेक्नोलोजी विकसित भएको छ।
समकालीन दर्शकहरूको धेरै छोटो ध्यान स्प्यानहरू छन्। पाठकको ध्यान लामो समयको लागि राख्न, तपाईंलाई तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा भिजुअल सामग्रीको मद्दत चाहिन्छ। एक बच्चाको रूपमा एक कथा पुस्तक पढिरहेको रूपमा तपाईंको श्रोतालाई सम्झनुहोस्। छविलाई बच्चाको उत्प्रेरणा र कथामा व्यस्त राख्नको लागि आवश्यक छ, त्यसैले तिनीहरू लामो समयसम्म चासो राख्नेछन्। उही तर्क वेब पृष्ठहरूमा लागू हुन्छ।
मार्केटर्ससँग वेब सामग्रीका लागि डाईनामिक र कस्टम ब्रान्डेड छविहरूको फाइदा लिन जारी छ।
भिडियो सामग्री र दृश्य कथा कहान
विगतका केही वर्षहरुमा, भिडियो सामग्री वेब मा यातायात को एक प्रमुख प्रवाह भएको छ। टेक्नोलोजिकल आविष्कारहरू जस्तै एआर, गतिशील इमेजरी, र यूट्यूबको लागि धन्यवाद, दृश्य कहानी कथाहरू र भिडियो सामग्री स्थिरता र लोकप्रियतामा बढेको छ।
अब एक वैश्विक चलन छ जहाँ उपभोक्ताहरू भिडियो सामग्रीमा बढी आकर्षित भएका छन्। सोसोलिनेसाइडरको अनुसन्धान अनुसार, वेबसाइटमा अर्को पृष्ठ/सामग्रीको टुक्रामा जानको लागि ट्याप गर्ने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या भिडियो भन्दा छविहरूको लागि about. 55% बढी छ। यसको मतलब यो हो कि धेरै प्रयोगकर्ताहरू रोकिन्छन् र भिडियो कथाहरू धेरै अन्त सम्म हेर्नुहोस्।
मार्केटिंगमा, भिडियो सामग्री प्रयोग गर्न अझ बढी राम्रो भइरहेको छ। भिडियो मार्केटिंग रिपोर्टको উইजोलको राज्यले पत्ता लगायो कि लगभग% 84% उपभोक्ताहरू भिडियो हेरेर उत्पादन वा सेवा किन्न विश्वस्त थिए। प्रतिवेदनमा सहभागी 79।% ले भने कि तिनीहरू विश्वस्त थिए र भिडियो हेरेपछि अनुप्रयोग वा सफ्टवेयर डाउनलोड गरे। उही सर्वेक्षणमा of%% सहभागीहरूले पाठ-आधारित लेख पढ्न रुचाउने १%% को विपरित छोटो भिडियो हेरेर उत्पादन/सेवाको बारेमा जान्न रुचाउँथे।
हबस्पटले ,000,००० भन्दा बढी उपभोक्ताहरूको सर्वेक्षण पनि गरेको थियो जहाँ support 35--44 वर्ष उमेरका% said% ले उनीहरूले समर्थन गर्ने ब्राण्डबाट थप भिडियोहरू हेर्न चाहान्थे भने २ 25--3 of बर्षिय उमेरका 56 56 %ले उनीहरूले थप भिडियोहरू चाहेको कुरामा सहमत भए।
हामी यो नबिर्सौं कि युट्युब संसारमा दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय खोज इञ्जिन हो। या त मिलेनियल वा जेन जे इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले YouTube लाई मनोरन्जन, आय र शिक्षाको सब भन्दा चाखलाग्दो स्रोत हुन। प्यानकेक रेसिपी युट्युब बिना वा यो कम्प्यान्ड कसरी बाँध्ने वा कसरी नाच गर्ने, दाढी गर्ने र टाई गाँठ्ने बनाउने सिक्ने कल्पना गर्नुहोस्।
बजारका रूपमा, हामी उपभोक्ता बानीहरू अध्ययन गर्दछौं उत्तम रणनीतिहरूको साथ। उपभोक्ता प्राथमिकता र बानीले देखाउँदछ कि भिडियो सामग्री राख्नु तपाईंको श्रोताको प्रतिशतमा पुग्न आवश्यक छ, हामीले राख्नुपर्दछ, वा हामी यत्तिकै कुशल र भरपर्दो छैनौं।
अवश्य पनि, भिडियो सिर्जना गर्नाले रूपान्तरणको ग्यारेन्टी हुँदैन। पाठ सामग्री जस्तै, तपाईं गुणवत्ता र बेच्न को लागी एक राम्रो कहानी चाहिन्छ।
तपाईंको E-A-T सुधार गर्नुहोस्
केही वर्ष अघि गुगलले यसको मुख्य अपडेट र उनीहरूलाई के गर्ने भनेर वेबमास्टरहरूलाई सम्झाउने एउटा ब्लग प्रकाशित गर्‍यो। ब्लग पोष्टले कार्य सिफारिशमा विशिष्ट थियो जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले गरिसकेका थिए: पढ्ने र बुझ्ने E-A-T र खोजी क्वालिटी राटर दिशानिर्देशनहरू। गुगलले विशेष रूपमा यस श्रोतलाई औंल्यायो र ई-ए-टी हाइलाइट गर्‍यो, जुन महत्त्वपूर्ण संकेत थियो जुन हामीले हाम्रो सामग्रीमा विशेषज्ञता, अधिकार, र विश्वास प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।
हामी कसरी वेबसाइटहरूको E-A-T प्रमाणित गर्ने?
अन्य प्राधिकार वेबसाइटहरूबाट उल्लेख र इनबाउन्ड लिंकहरू कमाएर।
तपाइँको साइट मा E-A-T जानकारी प्रदान गर्दै। यो एक बायो र हाम्रो बारे मा र लेखक पृष्ठहरुमा तपाइँको पत्यारपत्र समावेश गर्दछ।
तथ्या ,्कहरू, डेटा, र तपाइँको सामग्री मा तथ्यहरु लाई समर्थन गर्न अन्य आधिकारिक वेबसाइटहरु लाई लिंक गरेर।
तपाईको साइट र सामग्रीलाई सटीक, हालको र सान्दर्भिक जानकारीका साथ नियमित अपडेट गर्नुहोस्।
यो सबै गरे पछि पनि, तपाईंको सामग्री अपवादात्मक हुनुपर्दछ। यो प्रयोगकर्ता-हितकारी, उद्देश्यपूर्ण, र राम्रो रचना गर्नु पर्छ। एक पटक तपाईंको सामग्री E-A-T द्वारा ब्याक अप गरेपछि, यसले हराउन सक्दैन।
उत्तम र अधिक उद्देश्यपूर्ण सामग्री
सामग्री प्रासंगिकता तपाईंको सम्पूर्ण वेबसाइटको अप्टिमाइजेसन प्रयासहरूको लागि महत्वपूर्ण छ। अधिक बजारहरूले उच्च गुणवत्ताको सामग्रीको आवश्यकता महसुस गर्न थालेका छन्। असाधारण रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने सामग्री पहिले भन्दा राम्रो र अधिक उद्देश्यपूर्ण छ। हामीले कसरी राम्रोसँग सामग्रीले प्रयोगकर्ता खोज प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छौं भनेर सुधार गर्ने क्रममा हामी SEO को मुख्य उद्देश्य पूरा गर्छौं। प्रतिस्पर्धी कुञ्जी सर्तहरूको लागि श्रेणीकरण अझ कठिन हुनेछ किनकि प्रत्येक वेब पृष्ठले यसको ए-खेल ल्याउँछ। यहाँ हामी कसरी प्रतिस्पर्धा अगाडि रहन सक्छौं भन्ने केहि सुझावहरु छन्:
हामी लक्षित श्रोताहरूले केहि खोजशब्दको खोजी परिणामबाट अपेक्षा गरेको कुराको बारेमा अझ राम्रो समझ प्राप्त गर्छौं।
गुणवत्ता सामग्री दर्शकहरूको आवश्यकता अनुरूप लेखिएको छ। साइटमा सामग्रीहरूको टोन र शैलीमा स्थिरता।
गहन अनुसन्धान। गुगल र पाठकहरू सम्मानित स्रोतहरूबाट थप हालका तथ्या .्कहरू र डाटा हेर्न चाहन्छन्।
अधिक चाखलाग्दो र ट्रेंडिंग शीर्षकहरू।
अधिक भिजुअलहरू जस्तै इन्फोग्राफिक्स, ब्रान्डेड छविहरू, र वेबसाइट र यसका सामग्रीहरूमा कस्टम ब्लग छविहरू।
र जे होस् र्या ranking्किलो कडा हुनेछ, तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ जुन तपाईंको माथि सामग्रीको जुनसुकै काम गर्दछ किनकि यो उत्तम छ, र जब सम्म तपाईं सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, अन्ततः तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धा outrank हुनेछ।
ग्राहक पहिलो सामग्री
ग्राहक-पहिलो सामग्री खोज ईन्जिन र दर्शकहरूलाई जित्न सब भन्दा छिटो तरीका हो। लगभग% 88% सबैभन्दा सफल B2B मार्केटरहरू उनीहरूको श्रोताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै पदोन्नती/बिक्री सन्देशहरूमा प्राथमिकता दिन्छन्।
तिनीहरू यो गर्छन् किनकि तिनीहरू बुझ्दछन् कि उनीहरूको उत्पादन बेच्न उत्तम तरिका भनेको उनीहरूको दर्शकहरूको साथ विश्वास निर्माण गर्नु हो। बिल्डिंग ट्रस्ट मद्दत, निर्देशन, जानकारी, र मनोरन्जनको प्रस्तावबाट सुरू हुन्छ बदलामा केहि पनि नसोधेर।
SERP मा â „–1 हुनको अर्को तरिका धेरै उत्तम सामग्री वितरण गर्नु हो जुन बुल्सेमा प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई हिट गर्दछ। यदि तपाईं यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, गुगल तपाईंलाई पहिले राख्नमा बढी खुसी हुनेछ।
उपभोक्ता पहिलो सामग्री एक प्रवृत्ति हुन जारी छ किनकि त्यो गुगलको बारेमा हो।
तपाइँ कसरी तपाइँ कसरी तपाइँको सामग्री बाट लक्षित दर्शकहरु लाई चाहिन्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ?
प्रश्नहरू सोधेर, हामी तपाइँको लक्षित श्रोताहरूसँग संलग्न हुन्छौं र उनीहरूले वास्तवमा के चाहान्छन् भनेर पत्ता लगाउँदछौं। एकचोटि हामीले हाम्रो दर्शकहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्यौं, सामग्री सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ जसले तिनीहरूलाई गहिराइमा बोल्दछ। यो बिन्दुमा छ कि हामी सामग्री सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछौं जुन अल्ट्रा-लक्षित छ।
श्रोताहरू राखेर, उनीहरूले सोच्दछन् कि उनीहरूले उत्पादको लागि कति तिर्ने गर्दछन्, तर तिनीहरू लामो समयदेखि चाहिएको चीज पाउन प्रतीक्षा गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू यो सोच्न रोक्दछन् कि तपाईं उनीहरूको हातबाट पैसा बनाउँदै हुनुहुन्छ, र तिनीहरू तपाईंले प्रदान गर्नुभएको उत्पादन वा सेवाहरूको बारेमा सोच्न थाल्छन् र यो पाउँदा उनीहरू कत्ति खुसी हुन्छन्।
सामग्री र सामग्री मार्केटिंगको भविष्य अब हो। मा Semalt, हामी गुणवत्ता र बिक्री सन्देशहरू मा उपभोक्ताको आवश्यकता प्राथमिकता। हामी तपाईंको ब्रान्डको लागि वास्तविक तरीकामा विश्वास र अधिकार निर्माणमा केन्द्रित छौं।